Su'aal a380 Best on rikooo?
sano 2 2 todobaad ka hor #522 by ItzDan
Qofna ma yaqaan oo a380 i waa in ay qaataan
sano 2 2 todobaad ka hor - sano 2 2 todobaad ka hor #525 by Dariussssss
Mana hubo in aan heli ... Ma waxaad u jeedaa payware freeware ama, taas oo Qabille?
Freeware, waxaa jira oo kaliya hal Project Airbus A380. Payware, wax badan oo iyaga ka mid ah ... Wilco, AFS ... aan xitaa iyaga oo dhan xusuusan karaa.
info More noqon lahaa wax fiican.
Xogta ugu dambeysay: 2 sano 2 usbuucyadii hore by Dariussssss.
sano 2 2 todobaad ka hor #535 by Gh0stRider203
ma jiro. waa Airbus ....... raaci Boeing lol
sano 2 2 todobaad ka hor #536 by Dariussssss
Ama, sida Gh0st yiri, u tag, waayo, Boeing 747 haddii aad rabto in aad wax weyn.
In ku dhow oo dhan looga adkaaday si aan u ogaado off, diyaarado Airbus waa uun aan waxtar lahayn. Waxaan ahaa taageere Airbus adag dhinta muddo sanado ah, oo wuxuu lahaa in aan dib u soo noqdaan waxay on, oo kaliya sababtoo ah in.
Waxaan noqon lahaa ninka ugu farxadda live ah si aad u aragto diyaarado kuwa horumariyo si la mid ah sida Boeing, laakiin ... in kubad dheer.
sano 2 2 todobaad ka hor #537 by Gh0stRider203
ma waxaad tagi kartaa ka qaldan Queen ah oo cirka
Waxay ahayd in wax soo saarka tan 1970; Waxay ahayd gaadiidka aasaasiga ah ee Madaxweynaha Maraykanka tan iyo 1986; Waxay REAL fudud on indhaha; haddii aad ka heli model saxda ah (kuwa halkan on Rikoooo, ma dhihi karo eray xun oo ku saabsan, iyo in ay ii yimaadaa sida tijaabo ah, MA Haguhu a), ayay qabtaa sida riyo oo kale;
Ma u baahan tahay kale oo idhaahdaa?
Long Live Queen The! (747 ku heh)